Bright Apt kwindawo yasemaphandleni -nr.2
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguApartments Muznik
Ukhuseleko ngamaxesha e-Covid-19, siye saququzelela inkqubo yokungena ngaphandle kokudibana kwaye sathatha amanyathelo ongezelelweyo ukuqinisekisa ucoceko olufunekayo kunye nokubulawa kweentsholongwane.
* Umi kwindawo ezolileyo yedolophu, ebizwa ngokuba yiMlino.
Ukuhamba ngemizuzu eyi-15 kuphela ukuya kwiziko kunye nokuhamba ngemizuzu emi-3 ukuya echibini.
* Indawo yokupaka simahla ecaleni kwendlu
* Ilungele abantwana
* Izilwanyana zasekhaya zamkelekile (umrhumo: 15€)
* Irhafu yabakhenkethi 3.13 € / abadala / ngosuku AYIBAndakanywe kwixabiso
* Ukurenta ibhayisekile
* ebekwe kumgangatho wokuqala
* Ihlalisa ukuya kuthi ga kwi-5 abantu.
* Inegumbi lokulala elahlukileyo eline-queen-bed, ikhitshi elixhotyiswe ngekofu kunye nezixhobo zokwenza iti kunye negumbi lokuhlala elinesofa, ibhedi elala kunye ne-TV enescreen esicaba. Ikwanayo nebalcony yabucala kunye negumbi lokuhlambela elineshawa kunye nomatshini wokuhlamba.
* Ukwenza indawo yokuhlala ikhululekile kwaye isondelene, zonke iifestile zixhotyiswe nge-roller-shades. Indlu inoqhagamshelo lwe-wi-fi kunye ne-air-conditioning.
* Ilungele abantwana (indawo eninzi yokudlala)
*Izilwanyana zasekhaya ZAMkelwe (umrhumo: 15€)
cebiseka-Asinandawo yokwamkela kwaye asikho ngokusisigxina endlwini, ke uya kufumana imiyalelo YOKUZIHLOLA kwiintsuku ezimbalwa phambi kokufika kwakho.
4.80 out of 5 stars from 230 reviews
4.80 · Izimvo eziyi-230
Le ndlu ikwindawo yasemaphandleni ezolileyo, inomlanjana odlulayo.
Ichibi ngokwalo likumgama oyi-300m kuphela.
Ebumelwaneni kukho iindawo zokutyela, ivenkile yasekuhlaleni kunye nolwandle, apho unokuqubha kunye nokutshisa ilanga ngexesha lasehlotyeni.
Kufutshane nalapho kukho isikhululo sebhasi, esikusa kuzo zonke izixeko ezikufutshane neBled (Bohinj, Radovljica njl.njl.). Ikwaluqhagamshelo oluthe ngqo eLjubljana, kwisikhululo sikaloliwe iLesce-Bled, iVintgar Gorge njl.
Umbuki zindwendwe ngu- Apartments Muznik
* Ezi zindlu ziyinxalenye yeshishini lentsapho. Besirenta amagumbi ukusukela ngo-2008, kwaye senze uphuculo oluninzi apha ekuhambeni kweminyaka.
* Sineqela elincinci labasebenzi, elenza ukuba iindwendwe zethu zihlale zikhululekile kangangoko.
*Ukwenzela ukhuseleko ngamaxesha e-Covid-19, silungiselele inkqubo yokungena ngaphandle koqhagamshelwano. Sikwathathe amanyathelo awongezelelekileyo ukuqinisekisa ucoceko olufunekayo kunye nokubulala iintsholongwane.
* Sineqela elincinci lab…
UApartments Muznik yi-Superhost